Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiyaha JWXO oo cambaareeyay faldambiyeedka gumaysiga Itobiya
Gudoomiyaha JWXO oo cambaareeyay faldambiyeedka gumaysiga Itobiya
Waxaa bilihii ugu dambeeyay ay xasuuq baahsan ku hayeen maxaysatada ay Itobiya hubaysay ee loo yaqaano Liyu Boliska ama Hawaarin dad shacab ah oon waxba galabsan. Waxay meelo kala duwan oo dalka Ogadenya ka mid ah ka gaysteen maleesiyaadkaa uu gumaysiga hubeeyay xasuuq aan aabayeel lahayn oo dad badan oon waxba galabsan ku gumaadeen, hantidoodiina ku boobeen.
Anigoo ku hadlaya magaca Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenya (JWXO) waxaan si xoog leh u cambaaraynayaa xasuuqa iyo dhaca hantida ay maxaysatada lagu magacaabo Liyu Boliska ka sameeyeen 15kii iyo 16 bisha Mars Tuulooyin ka tirsan Degmada Gaashaamo, Gobolka Dhegaxbur. Maxaysatada ay Itoobiya u taba bartay una hubaysay inay dadka aan wax galabsan ee shacabka ah gumaadaan hantidoodana dhacaan ayaa bilihii ugu dambeeyey sii kordhayey xasuuqii ay awalba ku hayeen dadweynaha Somalida Ogadenya, waxaana ka mid ah meelaha ay laba todobaad ka hor ka gaysteen xasuuqa baahsan degmooyinka Gunagado iyo Gabriile, halkaasoo ay dad badan ku laayeen hantidoodiina ku dheceen isla markaana ku gubeen tuulooyin.
Wuxuu xasuuqa ka dhacay degmada Gashaamo ka mid yahay dhibaatada joogtada ah ee gumeysiga Itoobiya ku hayo shacabka Somaalida Ogadenya isaga oo isku deyaya, hasa ahaatee ku fashilay, inuu kartidooda iyo midnimadooda curyaamiya.
Maxaysatada Liyu Boliska talaabo ma qaadi karaan aan Taliska Addis Ababa raali ka ahayn. Sidaa darteed amarka lagu xasuuqayo shacabka aan wax galabsan waa siyaasad cadowga Itoobiya oo ku salaysan isir sifayn iyo dabargoonta umadda Somaliyeed. Sidaa darteed, waa faldambiyeed hadaf siyaasi ah laga leeyahay.
Ujeedada gumaysiga Itobiya waa in shacabka Somaliyeed ee Ogadenya looga jeediyo cadawgooda dhabta ah oo ah gumaysiga, oo dhibaato iyo colaad lakala dhex dhigo. Sidaa darteed waxaa looga baahan yahay in waxgaradka shacabka iyo oday-dhaqameedyada ay ka feejignaadaan shirqoolada gumaysiga oy uga digaan shacabka in maxaysatadan uu gumaysiga hubeeyay ay yihiin mooryaan uu ku adeegto gumaysiga oo aan lahayn heyb loo aaneeyo. Maxaysatadan waxay xasuuq iyo dambiyo kala duwan ka gaystaan dhamaan ciidda Ogadenya.
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (JWXO) waxay ugu baaqaysaa shacabka Somaliyeed meel ay joogaanba inay ka koraan aragtida gaaban ee ku dhisan qabyaalada iyo gobolaysiga oy u midoobaan cadawgooda soo jireenka ah. Inay fahmaan siyaasadda Itobiya ay u adeegsanayso Somalida ee ah qaybi saad u xukunto (Divide to Rule).
Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya (JWXO) cadaw aan ahayn gumaysiga Itobiya malaha, hadafka ururkana waa in shacabka Somaliyeed ee Ogadenya ay ka xoroobaan gumaysiga macancgaga ah wayna wadi doontaa ilaa hadafkaas laga gaadhayo.
Guddoomiyaha Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenya (JWXO)
Adm Maxamed Cumar Cusman
waxanhalkan kasalamayaa xaji maxamed cumar cisman hogamiyaha jawxo xafidahu laah geesiga qiimahabadan ee halgamaga ah iyo intalashaqaysaba salankadib waxa aan leeyahay waa in aad dar dar galisan dagalada aad ku haysan kufarta kiristanka ah xaaji maxamed dadkiiwaxa uu sugayaa ilaahay kadibna adiga uun ee waa in aadda daashaa inshaa allaah dhammanna waxan salamayaa shacabka reer o gadenniya mel ayjoganbadal iyo dibadba waxa aana leeyahay walaalayaal yalasamro allana halagbaqo cabsida ilaahay halagudadaalo